Imaisonette epholileyo enamagumbi ama-2 - I-Airbnb
Imaisonette epholileyo enamagumbi ama-2
Igumbi elihle, elincinci kwaye elithokomeleyo labantu abayi-3-5, libekwe ngokuzolileyo kanye kumda wehlathi. Ilungele iintsapho ezincinci, izibini okanye abahambi abangatshatanga ukuba baphumle kwaye bashiye ubomi bemihla ngemihla ngasemva.
Kwindlu exhotywe ngokupheleleyo, kulula ukuchitha ubusuku kwigumbi lokulala kunye nabantu abadala ababini kunye nomntwana. Kunokwenzeka ukuba wenze iibhedi ezimbini ngaphezulu kwesofa.
Indlu elandelayo ikumgama ozimitha ezingama-200. Indlela yokuhamba "iKammweg" ikhokelela ngokuthe ngqo kwindawo yokuhlala, yiyo loo nto ifanelekile ukuba abakhweli kunye nabakhweli beebhayisikile bamise kwinqanaba labo, baphinde batshaje iibhetri, imbono ekude yedolophu yeentlambo ezisixhenxe "Olbernhau" kwaye uxolo kakhulu kunye nenzolo kude kumaxhala ngemihla ukuze baphile.
Ukusuka kwindawo yokuhlala ungahamba ehlathini uye kwilali yokudlala iSeiffen (i-3km) okanye idolophu encinci yase-Olbernhau (5km), okanye ungaqala okanye uhambe uhambo oluya ePrague, e-Annaberg-Buchholz, eFreiberg, kwilali yase-Eibenstock sauna, Marienberg (umz pool lokuphola neebhafu thermal) okanye Dresden nje kunandipha uxolo kunye nomoya entsha amahlathi ore Mountains luninzi kunye amadlelo.
4.93 · Izimvo eziyi-115
Uhlala kumda wehlathi kumhlaba ozolileyo ojonge emazantsi-ntshona, ngaphandle kwetrafikhi enombono ocacileyo (ukuya kuthi ga kwi-8km) kwaye unokubukela ilanga lintywila emva komqolo weeNtaba zeOre.
Umnini-mhlaba unokufumaneka ngomnxeba. Iindwendwe zinokuhamba ngokukhululekileyo kwaye zingaphazamiseki kwigumbi kunye nasegadini.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Olbernhau